Cafe "Central perk" Saratov: incazelo, imenyu nokukala umsebenzisi
izitsha ezihlwabusayo kakhulu Italian uzilungiselele cafe "Central perk" (Saratov). Bathanda beze lapha imindeni yabo yonke, njengoba lokhu isikhungo bakulungele ukunikeza izimo best for yokuchitha isizungu ezimnandi futhi okuphumuzayo kumbuthano ethule. Kukhona futhi wayevame lobusuku romantic futhi umhlangano nabangani. Uma isikhungo agcwele ngamagama ambalwa, Central perk e Saratov - ethule, indawo ethokomele lapho ukupheka okumnandi.
Ngaphakathi ikhefi kuyinto wesimanje isitayela Mediterranean olufana ua izikhungo ekhishini. Ingaphakathi layo ubuswa elikhanyayo imibala ezindongeni ababethi ezimhlophe, nombala ofanayo iyona ifenisha - SOFAS kanye amatafula. The elingaphakathi lihlotshiswe imininingwane acacile: nendwangu phezu emafasiteleni, zokudla kuhlanzekile yini kanti kwezinye izindawo - isitshalo green. I ophahleni kulesakhiwo kwadambisa isimo esasishubile, ecwebezelayo. It ngokuphelele ibonisa ukukhanya, okuvela ezibizayo zekristalu, futhi kunikeza elingaphakathi a ekhethekile okunethezeka cafe "Central perk" (Saratov).
Esikhathini isikhungo, ngaphezu ihholo elikhulu, kukhona amadokodo VIP eziningana ukuthi ephelele kokuchitha isikhathi inkampani ezinomsindo zabangani noma imihlangano yebhizinisi ezibalulekile. Futhi kahle ukuhlangabezana nabathandekayo babo ukuze dinner yothando.
Ithimba labapheki esikoleni esasiphethwe ngumuntu wesifazane - Chef Irina Volkova, owayefundelwa ubuciko Culinary enhliziyweni Spain - Barcelona.
"Central perk" - cafe (Saratov), okungase ukunikela izitsha of cuisine Italian walungisa ngokusho zokupheka bendabuko. Isignesha isidlo kulesi sikhungo - pizza, okuyinto ungakhetha kwibanga ehloniphekile. Bakhonza labo zezinto eziphilayo yayo: "Roman" (kwasolwandle, ubhekeni rocket isaladi nge ham kanye pepperoni, nge ipheya flambéed noshizi Dorblu nge strachatelloy), "A la uKhesari," "Quattro Formadzhi" "Mista" "Izwe injabulo", "UMargarita" futhi ngokuqinile "Central perk".
Imenyu has a Ukukhetha ezinhle appetizers ( "Per Birr", "Tapas" we ithanga puree, "Tartar" Salmon "Carpaccio" nge yenkomo, Caprese "Al focaccia" cassoulet "Afetata Mista" bruschetta, "Buratto" squid crispy, mozzarella ethosiwe "Baby") kanye salads ( "ngesiGreki" elithi "Khesari," nge i-arugula, ihlosi izimfanzi, "di Novi Velia" "Frutti di Mare" "Melanzana" "Verona" "inhlanzi elingenamikhono "," Porcellino ").
Cafe "Central perk" (Saratov) inikeza Ukukhetha ezinhle temusho (inyama solyanka, umhluzi, ukhilimu isobho nge kwasolwandle, ukhilimu sauce nge amadombolo mini, hashi futhi "gazpacho") side izitsha (fritters squash, amazambane izitsha, ovoschi- hlupha). On yokudlela ashisayo banganikeza okumnandi kwasolwandle sikadali, stroganoff, inkukhu fillet emaphaketheni. Eyosiwe lapha esingazilungisa izinhlobo eziningana steaks kusukela inyama ( "Striploin", "Mignon", "sous-Weiden" inkukhu umucu nge imifino eyosiwe) nenhlanzi (salmon, Pike, perch, bream).
Abapheki Cafe Central perk ku Volskaya ungakwazi kusimangaze iyiphi connoisseur of cuisine Italy pasta okumnandi ngempela ( "Di Polo," "Di uManzo," "U-Alla Carbonara", "Frutti di Mare", "Bolognese", "Carbonara", "Di Fungi ") futhi lasagna (zakudala sauce" Bechamel "nge inkukhu kanye amakhowe).
Zonke izinyo elimnandi ngokuvakashela izindonga kulesi sikhungo, kukhona njalo ithuba zithokozise a sorbet okumnandi (uphayinaphu, raspberry, Mint, lime), berry ukuxubana ibhotela ukhilimu, i-vanilla profiteroles, amadombolo nge cottage shizi noma cherry, American Pancake nezithelo ngoqwembe. Kukhona Ukukhetha ezinhle ice cream (ushokoledi, ephistakhiyo, izithelo, vanilla). I dessert ethandwa kakhulu "Central yaseqhweni" - cotta panna kanye khekhe zakudala.
isikhungo Ibha ikhadi enikeziwe a Ukukhetha kahle iziphuzo ezahlukene. Futhi wabusa uhlu yalabo abanhliziyo zokupheka evela e-Italy. Ngokwesibonelo, e "Central yaseqhweni" ukupheka okumnandi lemonade Italian (nge-apula kanye isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, tangerines), ungase futhi ujabulele cocktail yokuqala ( "Aladdin," "Raffaello", "swallowtail", "Ferrari", "Intulo", " dream umzingeli "," Samba "," clown "," Panacea "). Futhi kule ikhofi cafe ukupheka "Raf" nge halva nosawoti, lo Irish "Toddy", "Frappe" nge amajikijolo namakhiwane. Cocktails ethandwa kakhulu isikhathi eside kukhona "uphudingi Scottish", "izicathulo Blackberry", "Del Mare" futhi "Trans-Siberian Express."
Ibha has okunezinhlobonhlobo esikhulu sezindawo izinhlobo zophuzo oludakayo.
Café "Central perk" ibhalwe futhi cocktail non-utshwala. Phakathi kwabo endaweni ekhethekile ugajwe ubisi (ushokoledi, banana, ikhofi kanye banana, amabhisikidi), kanye smoothie (-banana nut ushokoledi).
Njalo phakathi nesonto, kusukela kuvulwa isikhungo futhi 4 ntambama Likhefi umema bonke abafisa ubheka kwasemini ibhizinisi. Ngalesi sikhathi, ungakwazi ukujabulela okumnandi Cuisine Italian ngamanani neze kulokho.
Ukusungulwa inikeza izinketho eziningana for zikuyise ibhizinisi, okuyinto ababuthelwa kwelinye ezincane (ikhasi elilodwa) imenyu. Kusukela ke ungakwazi umyalelo isobho nge isaladi for ruble 160 noma 220, isaladi nge hot for ruble 250 noma ngokugcwele iqoqo ukudla ruble 310 noma 370 kuphela.
Plus, njengoba ibhonasi nice lapho iyala kwasemini ovela menu ibhizinisi kwasemini lezivakashi ngamunye uzothola isiphuzo yokuthopha.
Ukuze isivakashi wavakashela ngamunye yokudlela, lapha okulungiselelwe ngesethi Whatman umsizi. Noma ubani angakwazi bazigcina bematasa ngenkathi drawing nje ukulungiselela izitsha abawuthandayo.
Isimo e-cafe "Central perk" njalo ngezimpelasonto ecela abaculi abenza hits bukhoma owaziwa Russian angaphandle. Ngaleso sikhathi, lapho kukhona umculo bukhoma edlala ngemuva, okuyinto ezikhethwe ngokucophelela.
Kusukela nokuphathwa izikhungo abe izincomo eqinile ukubhuka amatafula ngaphambi kokuba ngivakashe sikhungo. Inombolo yefoni lapho ungakwazi ukukwenza, itholakala ekhasini ekhaya "Central perk". Kukhona ifomu lewebhu for yokubhuka inthanethi.
Eduze kwesango isikhungo has evikelekile yokupaka khulula izivakashi izimoto. Ngo amahholo yokudlela, ungakwazi ukujabulela inthanethi khulula. Lezi zimo wenze ukuhlala isivakashi ngamunye ukhululekile endaweni cafe ku Central perk Volskaya emgwaqweni.
Ungathola izimpendulo eziningi kwi cafe "Central perk". Kukhona ikakhulukazi wokubuyekezwa okuvumelekile, lapho ezikhombisa izinga eliphezulu uhlolwa ekhishini izikhungo: abantu abaningi ziyaneliswa kakhulu ngomsebenzi abapheki cafe futhi bathi le mali ukuthi ikhasimende okhokhela, uthola ukudla ngendlela enhle kakhulu kuphekwe.
Thanda izivakashi kanye service. Ngokwe-izivakashi, oweta akudingeki balinde isikhathi eside, ingayala kukhethwa izitsha ezivela imenyu. Ngaphezu kwalokho, izisebenzi zakulesi cafe "Central perk" professional ukusebenza ubani uchwepheshe emkhakheni wabo.
izivakashi Happy futhi indawo enhle lapho "Central perk" (amathilomu, Saratov) - Volskaya Street iseduze enkabeni yedolobha, futhi kukhona nezindlela ezihamba izithuthi zomphakathi, okwenza kube lula ukuthola izindawo, ngisho ngaphandle imoto siqu.
Ngokwesilinganiso, isikhungo kumasayithi ezahlukene uthola amaphuzu ehloniphekile - 4.5 5 amaphuzu kunokwenzeka. Kumele kuqashelwe ukuthi le ukuhlolwa kahle sifaneleka.
Cafe "Central perk" (Saratov) - yokudlela nge eyamukelekayo ngempela, omunye angase athi ngisho, amanani yeningi. Lapha, i-pizza zakudala ngokwesilinganiso kubiza ruble 450 elithi "Khesari," izobiza ruble 280, assorted imifino eyosiwe - 200, futhi ozithandayo kwabaningi panna cotta izobiza 190. nje Ngokwesilinganiso, ungakwazi adle lapha isheke ruble 500-800 kumuntu ngamunye, okuyinto ngempela ashibhe, futhi njengoba kwaphawula u-bakuleli dolobha nezihambeli zaseSaratov, wavakashela lesi sikhungo.
Ikheli lapho ungathola "Central perk" (amathilomu, Saratov): Volskaya emgwaqweni, 63/69. Itholakala cishe maphakathi nedolobha, eduze coffee shop "Ikhofi ushokoledi" kanye negama kwezamahlaya Nikitin abazalwane.
Lesakhiwo usuke esekulungele ukuthola izivakashi e ngaphakathi kwezindonga zabo nsuku zonke kusukela ngo-11 ekuseni ku-11 ntambama.
Pizza uchungechunge "Sawubona, pizza!": ukubuyekezwa. "Sawubona, pizza!": Imenyu, ukulethwa
"Cranberries ushukela" e Drakino Sibutsetelo yokudlela
On butholakala enqubweni eyinkimbinkimbi yokuthela design kanye nomklamo zokudlela Japanese
Likuphi enkantini best eMoscow? Isilinganiselwa ubhiya zokudlela enhloko-dolobha
Umngcele Wallpaper. Kuyini futhi kungani?
Dream Ukuhunyushwa: inkomo - lokho kuyiphupho nje?
Izimiso zokuqeqesha: izici nokucaciswa
Can ngokwayo ibe izinga ezimbi, lapho amacala futhi kungani?
The best zokudlela e Kiev: yokulinganisela, incazelo kanye nokubuyekeza amakhasimende
Isisu, abo injongo, izakhiwo, izicelo
Celestial - lokhu incazelo yegama elithi ...
Abstract: Tolstoy, Ngemuva kweBhola. Indaba yokuqala yomuntu